Musharax Cabdiramaan Cabdi ahakur oo shaaciyey lqcagta shqcabka asoomaliyeed ugu deeqeen | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Musharax Cabdiramaan Cabdi ahakur oo shaaciyey lqcagta shqcabka asoomaliyeed ugu...
Musharax Cabdiramaan Cabdi ahakur oo shaaciyey lqcagta shqcabka asoomaliyeed ugu deeqeen
Hogaamiyaha xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa shaaciyey lacagta ay taageerayaashiisa ugu tabaruceen xisbigiisa, tan iyo markii todobaad ka hor uu shacabka weydiistay iney ka kaalmeeyaan dhaqaalaha ololaha doorashada.
“Waxaan uga mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed lacagta ay ugu deeqeen ololaha doorashadeena. Waxaa todobaad gudihiis ina soo gaaray aduun lacageed oo $50 kun oo doolar ah” ayuu yiri C/raxmaan C/shakuur Warsame
Hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa ugu baaqay murashaxiinta kale, gaar ahaan Madaxweynaha dalka inuu shacabkiisa taageero waydiisto, halkii uu shisheeye ama hantida qaranka doorashada u adeegsan lahaa.
C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa sheegay ineysan ceeb aheyn in taageero la weydiisto shacabka, si loo helo madax iyo shacab isjecel oo hal meel uga soo wada jeesta danahooda.
Previous articleYAA ISKA LEH WAAJIBAADKA ARRIMAHA DOORASHOOYINKA
Imaaraatka oo si rasmi ah u daah-furay safaaraddiisa Israa’iil ee Dalkaasi
Daalibaan : Dhamaan ciidamada shisheeye waa in ay dalka ka baxaan...
Nin Soomaali ah ku nool Faransiiska oo danta ku khasabtay in...
Xasan sheikh : Nimankan dowladnimada ayey ku dheeleen Taliyeyaashii ciidamada oo...
Muran xoogan oo ka taagan koobka European Super League.